Tonga ny OTA-17 miaraka amin'ny fanohanan'ny NFC sy ny fanatsarana hafa | Ubunlog
Tonga ny OTA-17 miaraka amin'ny fanohanan'ny NFC sy ny fanatsarana hafa
Raha mila milaza ny marina tanteraka aho dia manoratra ity lahatsoratra ity satria ny lohahevitr'ity bilaogy ity dia Ubuntu, ho an'ireo mpampiasa ny fiarahamonina izay mety liana ary satria manana takelaka misy ity rafitra fiasa ity aho, saingy ny marina dia marina izany Ankehitriny, tsy hanome sosokevitra azy aho. Manokana ny safidinao manokana, ny vaovao dia ny UBports nipoaka la OTA-17 Ubuntu Touch, fanavaozana izay mitondra vaovao kely kokoa noho ny ilay iray natomboka roa volana lasa izay.
UBports dia nilaza fa, toy ny isaky ny famoahana, ny fanampiana dia nampiana ho an'ny fitaovana vaovao, indrindra ny Redmi Note 7 Pro sy Redmi 3s / 3x / 3sp. Nampiasain'izy ireo koa ny fotoana hampatsiahivana antsika fa miasa izy ireo amin'ny fanaovana ny dingana mba hametrahana ny rafitra fandidiana amin'ny Ubuntu 20.04, ny kinova LTS farany. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra, dia ho tonga amin'ny fahavaratra izany fotoana izany. Etsy ambany misy lisitr'ireo vaovao miavaka indrindra tonga tamin'ny OTA-17.
Zava-nisongadina tamin'ny Ubuntu Touch OTA-17
Fanohanana ny NFC, indrindra amin'ny ankamaroan'ireo izay mifanaraka amin'ny Android 9.
Ny flash, zoom, fihodinana ary ny fifantohan'ny fakantsary dia nahitsy tamin'ny fitaovana maro, anisan'izany ny tsy PineTab, ary noho izany dia ampahany amin'ny fahadisoam-panantenako amin'ity rafitra miasa ity.
Soso-kevitra vaovao ho an'ny fitendry antsoina hoe Macedonian.
Famaritana tsy mitombina ho an'ny frantsay frantsay ary ny sasany ho an'ny anglisy.
Libertine dia miasa tsara ao amin'ny OnePlus 3.
Fanatsarana ny mifanentana amin'ny Pixel sasany.
Fanatsarana ny fampifanarahana amin'ireo kaonty an-tserasera amin'ny fitaovana sasany.
Mir 1.8.1 (dia tamin'ny 1.2.0).
Raha ny filazan'ny UBports, raha mbola niasa tamin'ny fanombohana ny OTA-17 izy ireo dia nanao fandrosoana be dia be mba hanaovana ilay dingana ho an'ny Ubuntu 20.04, saingy OTA-18 dia hitohy miorina amin'ny Xenial Xerus. Famotsorana kely ity, toa an'ity, fa ny manaraka kosa mety hipetraka amin'ny Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Tonga ny OTA-17 miaraka amin'ny fanohanan'ny NFC sy ny fanatsarana hafa
KDE Gear 21.04.1, ny fanavaozana ny teboka voalohany hatramin'ny niovan'ny anarana hoe "Gear" miaraka amina fomba amam-panao ihany
Avogadro, amboary ary jereo ny molekiola miaraka amin'ity programa open source ity